Abavelisi beziTayile abaNcedisayo - China iArhente eNcedisayo yokuXhasa abaThengi kunye nabaNikezeli
Sebenzisa: i-arhente yokwenzakala, i-Detergent, amagwebu asezantsi, izinto ezinokungasebenzi kakuhle, ezingenabungozi, akukho zinto zinobungozi, ngakumbi
isetyenziswe kwi-flow-jet; Intsebenzo:
I-Detergent 01 sisicoci esinezinto ezinamandla zokukhupheza ezahlukeneyo
ioyile yokuthambisa esetyenziswa ngokulula kwiinaliti. Ilungele ngokukodwa ukutshabhiswa kwe
ikotoni edityanisiweyo kunye nokudityaniswa kwayo.
I-Detergent 01 inamandla okuhlamba kunye nefuthe elichasene nokwahlulwa ngokutsha kwe-wax kunye nendalo
Iparafini equlethwe kwifibre.
I-Detergent 01 izinzile kwi-asidi, ii-alkali, ii-arhente zokunciphisa kunye nee-oxidants. Ingasetyenziselwa kwi
Inkqubo yokucoca nge-acid kunye nokuhlamba kwebhafu ngeendlela ezahlukeneyo zokumhlophe.
I-Detergent 01 inokusetyenziswa kwakhona kwinkqubo yokubetha kweemveliso eziqukethe ukwenziwa
Iintsinga, ukuthunga imisonto kunye neeyile
yi-block silicone softener; ingasetyenziswa kwilaphu elihlukeneyo njengekotoni kunye nokudibanisa kwayo, i-rayon, i-viscose fiber, i-synthetic yentsimbi, isilika, uboya, njl.
amalaphu oboya. Inokubonelela ngendwangu ngolusu oluthambileyo, olugudileyo, olufileyo kunye nolutyheli obuphantsi.
● Inkangeleko engabonakali gca kolwelo
● Ubume be-Ionic bendibuthathaka
● Umxholo oqinileyo we-60%
Ukucuthwa kwe-Acidic Clearing Agent ye-PR-511A
Yinxalenye yearhente yokunciphisa okhethekileyo, enokuncitshiswa okungcono
umthamo kuluhlu olubanzi lwexabiso le-PH. Ingathatha indawo (i-sodium hydrosulfite + caustic soda) ye
Ukucoca kunciphise i-polyester kunye neendwangu zayo ezihlanganisiweyo emva kokudaya, susa umbala odadayo, phucula
ukuqina kombala welaphu
Ixabiso le-PH: 7 ~ 8 (isisombululo samanzi)
Umxholo oqinileyo: 22%
I-hydrophilic silicone softener 8850N
yi-emulsion encinci, esetyenziselwa ukuthambisa i-hydrophilic yekotoni kunye nelaphu layo elidityanisiweyo okanye ithawula ngesithambisi esithobekileyo, esigudileyo, esinefreyimu, hydrophilic kunye nozinzo olulungileyo.
Yinkimbinkimbi ye-polyoxyethylene polymer, esetyenziselwa ukugqiba i-polyester, i-acrylic, i-nylon, isilika, uboya kunye nezinye izinto ezidityanisiweyo. Umphezulu ophathwayo wefibre une-wettability elungileyo, ukuqhuba, ukulwa nokubekwa, ukungavisisani nothuli, kwaye kungaphucula ukusebenza kwe-anti-fuzzing kunye nokuchasana nokusebenza kwepilisi kwilaphu.